शनिवार, श्रावण ४, २०७६
As of Sat, 20 Jul, 2019 15:00
मंगलबार, असार १९, २०७५
सरकारी तथा निजी सेवाप्रवाह र कर्मचारी व्यवस्थापन
एउटा चेकलाई नगदमा बदल्न वा केही नगद जम्मा गर्न १० मिनेट समय लाग्यो भने पाका उमेरका धेरै सर्वसाधारणले तीन दशकपहिले सरकारी बैंकमा सेवा लिएको दृश्य सम्झन्छन् ।
विकास प्राथमिकता दुःख र समृद्धिको मृगमरीचिका
हालै मात्र विकास अर्थशास्त्रका केही विद्यार्थीले सोधे, “नेपालको विकास मोडल के हो ?” यो प्रश्नको सहजै र एउटै उत्तर भने छैन । देशका नाम चलेका अर्थशास्त्री, विकासविद् तथा योजनाविद्हरूसमेत यो प्रश्नमा अलमलिने गरेका छन् ।
सोमवार, असार १८, २०७५
इन्धन आपूर्ति किन कम ?
संयोग हो या भारतीय नियत, नेपालका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली उत्तरको छिमेकी देश चीनको भ्रमणबाट फर्केलगत्तै भारतबाट हुने इन्धन आयातमा कमी भएको छ ।
डा. भरतराम ढुंगाना
गरिबी निवारण अभियानमा लघुवित्त
नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले सामना गर्दै आएको एउटा प्रमुख समस्या गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिसहरूको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको विषय हो । गरिबी निवारण सरकारको हरेक योजनामा प्राथमिकताको विषय–वस्तु बने पनि अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुन सकेको छैन । नेपालले हालसम्म दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकेको छैन ।
आर्थिक भुमरीमा गाउँका सिंहदरबारहरू
‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ भनेर १५ वर्षको खडेरीपछि ठूलो उत्साहसँग चुनाव गरी गठित स्थानीय तहको सरकारले आफ्नो एक वर्षको कार्यकालमा जनअपेक्षाअनुसारका काम गर्न नसकेको र आर्थिक अनियमितताको केन्द्र बन्दै गएको छवि देखाउँदै छ ।
आइतवार, असार १७, २०७५
पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न मिरिक घोषणापत्र
नेपाल र भारतको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले नेपाल र भारतका अधिकारीबीच पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले मिरिक घोषणापत्र जारी भएको छ । विश्वभरका पर्यटकलाई आकर्षण गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका बेला नेपाल र भारतका अधिकारीहरूले समेत एकजुट भएर लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
हरि गोपाल प्रधान
जहाजको ढिलाइप्रति निगमको चासो
काठमाडौँबाट हुने पहिलो उडान मौसम, प्राविधिक अथवा अन्य कारणहरूले ढिलाइ भएमा त्यसपछिका उडानहरू पनि स्वतः नियमित हुन सक्तैनन् । हाम्रा अधिकांश आन्तरिक विमानस्थलमा इन्धन आपूर्तिको सुविधा नभएको हुँदा विमानलाई फर्कन चाहिने इन्धनको समेत पहिले नै व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पनि त्यही अनुपातमा विमानको बोझ घटाउनुपर्छ । जहाजको ढिलाइप्रति निगमको चासो हरि गोपाल प्रधान नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज ढिलो उड्छ, धेरै गुनासो सुनिन्छ । यस्तो गुनासो सुनिनु स्वाभाविकै हो । तर, जहाज किन ढिलो उड्छ भन्ने कुरातिर पनि त्यस्तो गुनासो गर्नेहरूले ध्यान दिनुपर्ने हो कि !
पुँजीबजारमा प्रविधि, लागत र बहिष्करणको जोखिम
सूचना प्रविधि पनि गाँस, बास र कपासजत्तिकै महŒवपूर्ण आधारभूत आवश्यकता, व्यवसाय, मुनाफा, कूटनीति, राजनीति सबैको अस्त्र भएको छ । समाजको अविभाज्य हिस्सा हुन पुगेको अवस्थामा पुँजीबजार प्रविधिबाट अछुतो रहने कुरै भएन ।
शुक्रवार, असार १५, २०७५
स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवहार सुधारौं
वि.सं. २०१० मा जन्मनुभएका हाम्रो बुबाले वि.सं. २०६६ कात्तिक महिना अर्थात् आजभन्दा झन्डै १० वर्षअगाडि ५५ वर्षकै उमेरमा हामीलाई छाडेर जानुभयो । उहाँलाई श्वास–प्रश्वास नलीको सेल डेथ भएको रे भन्थे, तर त्यो कुन रोग थियो, अझै राम्रोसँग थाहा छैन ।
निजामती सेवा : सुधारको अपेक्षा
सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध सेतुका रूपमा रहेको हाम्रो प्रशासन संयन्त्र पुनर्संरचनाको सँघारमा रहेको छ । यस क्रममा कर्माचारी समायोजनको मुद्दा निकै पेचिलो बन्दै गएको छ । संविधान जारी भएको तीन वर्ष व्यतीत हुँदासम्म कर्मचारी समायोजनको विषय निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय निजामती सेवाको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने कुराको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । यसबीचमा कर्मचारी समायोजन ऐन बन्यो । तर, कार्यान्वयन हुन भने सकेको छैन ।
देश–विदेशमा धानको महिमा
नेपालमा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघले घोषणा गरेअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय धान वर्ष सन् २००४ (२०६१) मनाउने सिलसिलामा कृषिक्षेत्रबाट विभिन्न प्रकारका जनचेतना जगाउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको थियो । यस लेखकको विशेष पहलमा नेपाल सरकारको २०६१ साल मंसिर २९ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार अब आइन्दा प्रत्येक वर्षको असार १५ लाई ‘राष्ट्रिय धान दिवस’ का रूपमा मनाउने घोषणा पनि भएको थियो ।
बिहिवार, असार १४, २०७५
चीनको मिसन–२०२५ असफल बनाउने तयारीमा ट्रम्प
विश्वका दुई शक्तिशाली देश अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्ध थप बढेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निशानामा अब चीनको प्रविधि कम्पनीमा गरिने लगानी परेको छ । मिडियामा आएका समाचारअनुसार राष्ट्रपति ट्रम्पले छिट्टै अमेरिकी उद्योगहरूमा हुने चिनियाँ लगानीविरुद्धको नयाँ उपायको घोषणा गर्न सक्नेछन् । ट्रम्पको यो कदमले विश्वका दुई सर्वाधिक ठूला अर्थतन्त्रबीच व्यापार युद्ध बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विकासको मूल फुटाउने चेतना आवश्यक
नेपालको बजेट संस्कृति अनेकन कमी–कमजोरीका बीचबाट गुज्रिएको पाइन्छ । २०६१÷६२ पश्चात् ४ पटक निर्धारित समयमा बजेट आउन सकेन । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले १८ महिने प्रधानमन्त्रीकालमा बजेट पस्कन पाएनन् । आव ०६७÷६८ को बजेट मंसिर ४ गते मात्र अध्यादेशमार्फत ल्याउनुप¥यो । बजेट वक्तव्यकै क्रममा ब्रिफकेससमेत फुटाइयो । फागुनमा मात्र पूर्ण बजेट पारित हुन पायो ।
पर्यटक संख्यामा कि गुणस्तरमा
पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान कम्तीमा २५ प्रतिशत पु¥याउने दीर्घकालीन लक्ष्यसहित अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
बुधवार, असार १३, २०७५
स्रोतमा परनिर्भर स्थानीय तह
आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि मकवानपुरका सबै स्थानीय सरकारले असार १० गते बजेट जारी गरे । १ उपमहानगर, १ नगरपालिका र ८ वटा गाउँपालिका रहेको मकवानपुरमा सबै स्थानीय सरकारको बजेट भने परनिर्भर देखिएका छन् ।